Izithelo ezivuthiwe ezondleni zezingane
Abazali njalo bathatha ukudla kwabazali babo ngokwanele. Amavithamini, ama-microelements, amaminerali - konke lokhu kuyadingeka ekukhuleni okujwayelekile kwengane yakho. Uma ehlobo nasekwindla yasekuqaleni - enezinhlobonhlobo zemifino nezithelo - ukudla komntanakho kugcwele, ke yini okufanele ukwenze ebusika nasentwasahlobo?
Ungagcwalisa igebe lemifino ngamasheya "engadini," bese usebenzisa izithelo ezifriziwe emndenini wezingane. Yiqiniso, kunezinkolelo ezithile mayelana nalezi zinsuku, ngakho-ke ngiphakamisa ukuba ngizixoshe.
Inganekwane eyodwa: imifino entsha ingcono kunamaqhwa
Ngakolunye uhlangothi - yebo, kwesinye - cha. Uma sikhuluma ngezihlobo zasehlobo, ke-ke, kuyadingeka ukudla izipho ezintsha zendalo. Uma ingxoxo iphathelene nobusika, khona-ke sizokunikeza izithelo ezibandisiwe emndenini wezingane. Kungani? Iqiniso liwukuthi inani eliphelele lempahla ebalulekile futhi ewusizo ezithelo liqukethwe ekuvuneni. Ngokuhamba kwesikhathi, inani labo liyancipha, futhi ngenxa yalokho, ingane izothola amavithamini amancane kakhulu kunalokho okuhleliwe. Futhi manje ake sikhumbule ukuthi yiziphi "izithelo" eza kithi ebusika? Morocco, Brazil, China, Chile, ngakho-ke, ngenkathi i-apple esilinde isikhathi eside "ebusika" ifika esitolo sethu saseRussia, kuzothatha amasonto nesigamu, kungabi ngaphansi. Engeza kulokhu ukusetshenziswa kwama-preservatives nama-parafini ukuqeda ukwehluleka kwangaphandle kwezithelo zasaphandle, futhi uthola isithombe sangempela.
Izithelo ezivuthiweyo, futhi, ngokugcina kahle, zilondoloza amavithamini namaminerali amaningi. Inkinga yesitoreji, kulesi simo, ifanele kakhulu. Imikhiqizo efriziwe ine-nuance yayo - ingaba nenqubo yokulimaza kanye. Ngemuva kokuphefumula okuphindaphindiwe, izakhi zilahlekile ngobuningi obukhulu. Ukuqeda ukhetho lokuthenga izithelo eziye zadlula amaqhwa amaningana, uthenge imikhiqizo yalezo firms ezinikezela amaphakheji ngezinkomba ezingasebenzi.
Inganekwane Ebili: Izithelo ezivuthiwe zilahlekelwa ukunambitheka kwazo
Uma ukukhishwa kwemikhiqizo kwakungalungile, i.e. cishe ngaso leso sikhathi, futhi yonke imithetho yokugcina igcinwa, izithelo ezibandayo zinekhanyane ngokwanele kanye ne-juiciness. Uma ufuna ukuzifakela ukudla ngokwakho, ke uhlale ukhumbule ezinye ze-nuances zalolu hlelo:
Qiniseka ukuthi ugeza izithelo ngokuphelele, bese uyomisa;
Amafutha afanelwe kahle cishe zonke izithelo, ngaphandle kwebhanana nezithelo eziqukethe amanzi amaningi;
Amajikijolo nezithelo ezinamathele zifakwe emgodini, bese uthele ezitsheni noma ezikhwameni ze-polyethylene;
Ama-apula, amapheya kanye nama-peaches ngaphambi kokuqhwaza angafafazwa ngejusi likalamula ukuze bangabi mnyama
Ungagcini izithelo ezibandisiwe egumbini elilodwa lefriji, kanye nenhlanzi neminye imikhiqizo.
Ukusebenzisa umthetho othi "fast-slow", isb. ngokushesha efriziwe futhi kancane kancane behlanza, isibonelo, esiqandisini, ngaleyo ndlela balondoloze ukunambitheka okungaphezulu nomswakama emkhiqizo, sizofeza umphumela omuhle kakhulu. Lokhu kubaluleke kakhulu, ikakhulukazi ekudlaleni kwezingane.
Inganekwane Yesihlanu: Izithelo ezivuthiwe zilahlekelwa umbala wazo
Ngempela, kunombono wokuthi abakhiqizi bengezela ama-dyes ukudla okuneqhwa ukuze balondoloze umbala wabo. Akunjalo nhlobo. Futhi, uma ubuyela emuva ezinkambisweni zokuqhwaza, ukugcina, ukuphazamisa nokuqinisekisa ukuthi konke kwenziwa kahle, akukho "imibala" yokufakelwa edingekayo. Futhi ngani? Ngemuva kokuqeda izithelo, kuvele kucace ukuthi into "isetshenziswe ngaphandle", futhi ungakwazi ukubuyela kalula kulo mkhiqizo esitolo.
Inganekwane Eyisine: Izithelo ezivuthiwe zisetshenziselwa izithelo
Konke sekuphambene kakhulu. Izithelo zekhwalithi ezinhle kuphela ezifanele ukukhanda. Ngisho ne-spoiled encane kuyodingeka kusetshenzwe isikhathi eside, ngakho-ke abakhiqizi basebenzisa izithelo ezintsha futhi "eziqinile". Ngisho noma iphakethe liqukethe ama-specimens angcolile, ngokushesha agijimela amehlo akho. Thatha imaphakheji ngokuphepha futhi-esitolo!
Inkolelo yesihlanu yenkolelo: ama-compotes akhiqizwayo kanye nejamu abaluleke kakhulu kunezithelo ezibandisiwe
Yiqiniso, yonke into eyenziwa ekhaya ibonakala ngathi iyasiza kakhulu, kodwa, yebo, lokhu akuyona into njalo. Okokuqala, ukwenza izithelo zihlanganisa, sibheka ukushisa ukushisa, okuyinto kunoma yikuphi okuholela ekulahlekelweni ingxenye yamavithamini. Okwesibili, ku-compotes efanayo, nokunye okunye okuyi-jam, sine ushukela ne-citric acid. Mhlawumbe, amalungiselelo asekhaya ayinambitheka kunezithelo ezibandisiwe, kodwa ekuncelweni kwezingane, isici esibaluleke kakhulu konke okufanayo.
Ngakho-ke, ngezinganekwane ngezithelo ezibandayo, sazihlunga. Ake siqhubeke nezithelo ngokwabo, noma kunalokho, ngaluhlobo luni olungabanjelwa iqhwa, futhi yini engenziwa nabo ngaleso sikhathi.
Izithelo zamahhala zingaphelele, uma zingekho usayizi omkhulu, uthathe ngisho namajezi namazambane ahlambulukile. Njengoba sinikeza ukuthi sikhuluma ngokudla kwezingane, ukhetho lokugcina lulula kakhulu ukusebenzisa. Izithelo ezintsha zingacutshungulwa ku-blender esimweni esihle, sidluliselwe esitsheni esenzelwe ukugcinwa efrijini futhi, empeleni, efriziwe. Ngama-juice cishe okufanayo, kodwa ngiyaqaphela ukuthi ukusetshenziswa kweziqukathi zangilazi zokugcina ama-frozen ama-frozen, akunjalo akunakwenzeka.
Ungasebenzisa izithelo ezifriziwe ngezindlela ezahlukene. Isibonelo, ukwenza ubusika i-vitamin cocktail. Hlanganisa ubisi lwe-blender kanye nezithelo ezifriziwe. Kuvela futhi kuyinambitha, futhi kuyasiza, futhi ngokushesha. Isaladi lezithelo, amazambane ahlambulukile, i-mousse, i-pudding, iziphuzo zezithelo kanye ne-compotes izojabulisa ingane yakho futhi isekele impilo yakhe. Ukusetshenziswa okuvame kakhulu kwezithelo ezifriziwe kungumhlobiso we-dessert njengezithelo ezigcwele, ngakho-ke umhlabathi, ogcwele gelatin yokudla.
Ukufingqa, ngiyaqaphela ukuthi ngesikhathi sasebusika umzimba wengane utholakala ezinhlobonhlobo ezinkulu zokusongela lesi sifo. Ukungavikeleki komzimba kunciphile, ngakho-ke, kufanele kugcinwe. Ukudla okulinganiselayo, kulokhu, kungenye yezindlela zokusekela inhlalakahle yengane yakho. Izithelo ezivuthiwe ebusika zizokunikeza isevisi enhle yokugcwalisa izitolo zamavithamini nama-microelements emzimbeni womntanakho.
Izinguquko zanamuhla zokuzijwayeza ngokweqile
Isaladi lehlobo nge-ulethisi ne-ananas
I-brand brand Premie ihlinzeka ukuphakama ngaphezu komhlaba
Amakhukhi anezigcwaliso ongakhetha kuzo
Umkami ka-Alexander Kerzhakov wasukuma ukuvikela, kodwa kamuva wasusa isikhundla sakhe ku-Instagram
I-Carpal Tunnel Syndrome: Zisiza wena
Izimfihlo zokukhala kukaLiz Hurley
UFebhuwari u-horoscope 2014: thola ukuthi yini okugcinwe kuwe
Umamazala uyisilwane sami esithandekayo nesithandekayo
Cheesecake yaseRoyal ne-cherries nama-alimondi
Umgomo ojwayelekile wokuphathwa kwe-demodectic